Iindaba - Turkey Cutlets Marsala
Le turkey iMarsala isebenzisa i-cutlets encinci, yenza isidlo esincinci kwaye esimnandi, kwaye kuthatha imizuzu nje ukulungiselela nokupheka.Isidlo singaba silungile (kunye ne-pasta yeenwele ezikhawulezayo zengelosi kunye nesaladi) ngaphantsi kwemizuzu engama-30, kwaye kukho isiphithiphithi esincinci.
Khonza i-turkey ngeentlobo ezahlukeneyo zemifuno okanye isaladi kwisidlo esilula, okanye wenze isidlo sakusihlwa nge-angel hair pasta okanye iitapile ezigcadiweyo.
Ukulungiselela: 10 imiz
Ukupheka: imizuzu eyi-12
Iinkonzo: ii-servings ezi-4
1/3 indebe yomgubo wenjongo yonke
I-1 ukuya kwi-1 1/4 yeepounds ze-turkey cutlets, malunga ne-6 encinci okanye i-4 cutlets.
Ityuwa ye-Kosher, ukunambitha
Ipepile entsha emnyama, ukunambitha
Iipunipoli ezi-2 ezingafakwanga ibhotela
Iipunipoli ezi-2 zeoli yeoli ye-olive, yahlulwe
Iipunipoli ezi-2 ze-shallots ezicoliweyo
Ii-ounces ezi-8 zamakhowa, zisikiwe, zikhethwa
2/3 indebe eyomileyo yewayini yaseMarsala
2/3 indebe ephantsi-sodium yenkukhu umhluzi
1. Qokelela izithako.
2.Beka umgubo kwisitya esibanzi esinganzulwanga.
3. Beka i-cutlets kwindawo ethe tyaba kwiphepha eline-wax okanye kwi-parchment (i-mess encinci!) kwaye uchithe macala omabini ngetyuwa ye-kosher kunye ne-pepper emnyama esandul' ukugatywa.
4.Gcoba ii-cutlets ngokucokisekileyo ngomgubo.
5. Kwi-pan enkulu yentsimbi okanye i-pan phezu kobushushu obuphakathi, unyibilikise ibhotela nge-1 isipuni seoli yeoli.Xa ibhotela ishushu kwaye igwebu, yongeza i-cutlets.Pheka imizuzu emi-2 kwicala ngalinye.Yisuse kwipleyiti kwaye ubeke ecaleni.Ukuba ii-cutlets zakho zincinci, kuya kufuneka wenze oku kwiibhetshi ezimbini
6.Yongeza i-shallots eqoshiwe kwi-pan yentsimbi kwaye upheke uvuselela, imizuzu emi-2.Yongeza amakhowa asikiweyo, ukuba usebenzisa, kwaye uqhubeke upheka de kube ama-mushroom athambe, malunga nemizuzu emi-3 ukuya kwe-4.
7.Galela iwayini yeMarsala kunye nomhluzi wenkukhu epanini;yibilise ngobushushu obuphezulu, ukrazule amasuntswana amdaka ezantsi kwepani.Ukupheka de ijusi iyancitshiswa kwaye ixutywe, malunga nemizuzu emi-5.
8.Yongeza i-turkey cutlets emva kwepani.Ukunciphisa ubushushu obuphantsi kwaye udibanise imizuzu emi-2 ubude.
9.Khonza ngesaladi kunye ne-angel eshushu ephekiweyo yeenwele zepasta okanye i-spaghetti ebhityileyo, okanye unike icala leetapile ezigcadiweyo.